Malawi: Fanehoankevitra momba ny fananganan-jaza faharoa an’i Madonna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2019 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, Français, বাংলা, English
Hahita ity firenena Afrikana ity ireo izay mbola tsy naheno mihitsy momba an’i Malawi, tamin’ny alàlan’ny fahasoavan’i Madonna fotsiny ihany izany, izay tsy mahafantatra ny anarany feno ny ankamaroan’ny olona
Rehefa tonga tany Malawi i Madonna mba hanangana an’i David Banda tamin’ny taona 2006 dia nifangaro ny fanehoankevitra. Niely ny tsaho rehefa nifarana ny adihevitra momba ity fananganan-jaza voalohany ity, izay nilaza fa nandeha tany Malawi ilay kintan’ny Pop mba hanangan-jaza hafa indray ; saingy tamin’ity indray mitoraka ity, zazavavy iray antsoina hoe Chifundo (Mercy) James izany.
Nilaza ilay bilaogera Rex Chikoko fa tamin’ity indray mitoraka ity dia toa nisedra fahasarotana ny fahatongavan’i Madonna satria nilaza ny mpitsara ao amin’ny Fitsarana Tampony Esme Chombo fa manakana an’i Madonna hanangana ilay zaza voakasika ny lalànan’ny fananganan-jaza ao Malawi satria efa nipetraka 18 volana teo ho eo tany Malawi izy. Saingy noho ny fampakarana ny raharaha tao amin’ny Fitsarana Tampony dia nandresy i Chifundo, amin'ny filazana fa ny fijanonana ao amin’ny firenena iray, amin’ny tontolo maoderina, dia azo alaina na aiza na aiza ary manan-jo hanana trano fonenana mihoatra ny iray ny olon-drehetra.
Tezitra tamin’ny lahatsoratra momba ity fananganan-jaza ity izay naneso an’i Malawi navoakan’ny The Guardian izay nosoratan’i Jacques Peretti ilay mpanao gazety sady bilaogera Malawita Kondwani Munthali, sy tamin’ny lahatsoratra iray hafa nivoaka tao amin’ny Mirror, izay nilaza fa nividy ny vahoaka Malawita tamin’ny vola mitentina 19 tapitrisa dolara Amerikana na [ 13,5 tapitrisa euros] i Madonna ho takalon’ny zaza iray. Lahatsoratra vao maika tena manafintohina. Hoy i Munthali :
Ao anatin’ity adihevitra ity dia nanamafy ny bilaogera hafa iray Ndagha fa tsy azony mihitsy ny antony mbola nanomezana an’i Madonna ity zaza faharoa ity.
Niantso an’i Madonna ho ‘Mpanao asa soa anay’’ ny olona sasany ao Malawi, noho ireo fanomezana toy ny vola ho an’ny vahoaka malawita ary indrindra indrindra ho an’ireo zaza vitsivitsy tsara vintana izay mandray soa avy amin’ny fandaharan’asany antsoina hoe Raising Malawi.